Umshini wokusika we-Tube Laser
Plate Futhi Tube Laser Cutting Machine
Tube Okuzenzakalelayo Ukondla Laser Cutting Machine
Umshini Wokushisela we-Laser ophethwe ngesandla
Laser Ekubunjweni Umbhede
Laser Sakaza Aluminium Beam
Izizathu Five Sebenzisa Precision Laser Cutting Machine
I-Laser cutting iyinhlobo engeyona yokuxhumana, isuselwa enqubweni yokukhiqiza eshisayo ehlanganisa ukushisa okugxile namandla okushisa, futhi isebenza ingcindezi yokuncibilikisa nokufafaza izinto ezindleleni ezincane noma ekusikeni. Uma kuqhathaniswa nezindlela zokusika zendabuko, i-laser cutting inezinzuzo eziningi. Okugxile kakhulu ...
Ungayikhetha kanjani amandla we-laser tube cutting machine?
Empilweni yansuku zonke, imvamisa sibheka amapayipi wensimbi ngokuhlangana njengamapayipi wensimbi, kepha emkhakheni wokusika ipayipi, kufanele sihlukanise ukuthi insimbi yipayipi lekhabhoni yensimbi, ipayipi lensimbi lensimbi, ipayipi lensimbi engagqwali, ipayipi le-titanium ingxubevange noma ipayipi le-aluminium ingxubevange . Ngoba izinto ezahlukahlukene ziyehluka ...
Yiziphi amaphutha ezivamile kanye nezindlela zokwelapha imishini laser ahlabayo?
Uma usebenzisa umshini wokusika we-laser, izinkinga zivame ukuvela ngenxa yesikhathi eside sokusebenzisa esiqhubekayo, indawo yokusebenza enothuli kanye nekhwalithi ephansi ye-opharetha. Yini okufanele ngiyenze uma kunezinkinga ezithile ezivamile? Okokuqala, alukho uhlelo lokuqalisa okujwayelekile: Ukusebenza kwephutha: amandla amakhulu ...
Ukubambisana Okujabulisayo ku-IE expo China 2021
Ngo-Ephreli 22, IE expo China 2021 isiqedile eShanghai, China. Sisungule ubudlelwano obuhle bebhizinisi namakhasimende avela nxazonke zomhlaba ngokulingana. Sikhombise eminye imikhiqizo ku-Fair, njengomshini wensimbi we-fiber laser cutting machine, umshini wokusika ipayipi we-laser, ipuleti ...
Kungasetshenziswa ngaziphi izindlela imishini yokusika ye-CNC laser namuhla?
Ukuzisika kwe-Laser ukufaka esikhundleni sommese wendabuko ngomuthi ongabonakali. Inezici zokunemba okuphezulu, isivinini sokusika okusheshayo, kungagcini emaphethini wokusika, ukusethwa okuzenzakalelayo, izinto zokonga, ukusika okushelelayo, nezindleko zokucubungula eziphansi. Izothuthukiswa kancane kancane ...
Ukusetshenziswa kwe-Fiber Laser Cutting Machine Equipment on Industrial Materials
Ngokuthuthuka okusheshayo kwesayensi nobuchwepheshe, imishini yokusika i-fiber laser isetshenziswe kakhulu emakethe yezimboni. Imishini yokusika ye-fiber laser inokunemba okuphezulu kokusika nesivinini esisheshayo, esingathuthukisa ukusebenza kahle kuka-60% futhi songe izindleko eziningi. Ngakho-ke, ba ...
Ungayithola Kanjani Iningi Lemishini Yokusika I-Laser Yakho
ngomphathi ku 21-04-03
Ukuzisika kwe-laser laser kufaka imishini esezingeni eliphakeme edinga ukugcinwa okujwayelekile ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu. Ngemuva kwakho konke, ukusika i-laser kumayelana nokunemba, ngakho-ke ukugcina imishini yakho isesimweni esiphakeme kubalulekile ekutholeni imiphumela wena noma amaklayenti akho oyilindeleyo. Ngaphandle kwesibambiso esifanele ...
Izimpawu zokusika ze-fiber laser emshinini wokusika we-laser wensimbi
Ngokusetshenziswa okunamandla komshini wokusika we-fiber fiber wensimbi, ubuchwepheshe bemboni ye-laser buvuselelwa njalo buvuselelwe, okunikeza lula ukucubungula nokukhiqiza, konga izindleko zabasebenzi, futhi kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza nemali engenayo ...
Umshini wokusika we-Laser brand yasekhaya usezingeni, kuthiwani ngekhwalithi?
uma ufuna metallaser ahlabayo umshini yini brand ok? Amakhasimende amaningi ngaphambi kokukhetha umshini wokusika we-laser azokhathalela umphumela wohlobo lomkhiqizo wemishini, okungukuthi, okulingana nedumela lomuntu ngaphandle, bese kuthiwa ukukhiqizwa kwemikhiqizo ye-laser yi-Wei Qian, sudde ...
Indlela yokulungisa iphutha nokuthuthukisa ijubane nomphumela womshini wokusika we-laser?
Izakhi zemishini yokusika i-Laser ziningi, ezinye izingxenye zesikhathi sokugcinwa zifushane, umshini wokusika we-laser uvame ukuwunakekela. Ungayisusa kanjani iphutha umshini wokusika we-laser? Ungayisusa kanjani iphutha ukuze isike ngokushesha nangcono? Udinga ukugcina njalo, ukuze ugcine okuhle ...
Ukwakhiwa nokusebenza kwesimiso somshini wokusika we-fiber laser tube
Ukucutshungulwa kwe-laser komshini wokusika we-fiber laser tube kwenziwa ngemidwebo yekhompyutha, elula futhi elula ukusebenza. Ngokuya ngokucubungula ihluzo, ingaqedelela ukucubungula okuguquguqukayo kwanoma iyiphi ihluzo. Futhi ingaqaphela okukhulu, ukusebenza kahle okuphezulu, h ...
Ukusetshenziswa komshini wokusika we-fiber laser ekusikeni izinto zethusi
Umshini we-fiber laser cutting ungasetshenziswa ekusikeni izinto ezahlukahlukene. Bekulokhu kuyindawo eyimpumputhe ekusikeni izinto zensimbi. Ishintshile eminyakeni yamuva. Eminyakeni yamuva nje, iye kancane kancane kugqugquzelwa ekusetshenzisweni ahlabayo zethusi Production ...
Indawo A, Intelligent Manufacturing Industrial Park, Binhu Avenue, High-tech Zone, Pizhou, esifundazweni saseJiangsu